Kuza izinguquko ezinkulu kwi-Arrows - Ilanga News
Home Ezemidlalo Kuza izinguquko ezinkulu kwi-Arrows
UMato Madlala uthi ngeke amvimbe uNcikazi uma eshelwa
UMCIMBI wokuhlonishwa wumasipala weTheku kwamakilabhu ePSL azinze kuleli dolobha bewuhanjelwe ukusuka kwesobunxele nguNdunankulu waKwaZulu-Natal uSihle Zikalala, uShauwn Mkhize ongumnikazi weRoyal AM, u-Andile Mpisane onguSihlalo we-AM, uMato Madlala ongumnikazi we-Arrows, uNceba Madlala oyiMenenja yale kilabhu noMxolisi Kaunda oyiMeya yeTheku
KUNGASE kubonakale izinguquko ezinqala kwiLamontville Golden Arrows eqede isizini isendaweni yesine okokuqala ngqa emlandweni wayo kwilog yeDStv Premiership ngesizini esanda kusongwa ka-2020/2021.
UMato Madlala ongumnikazi we-Arrows, utshele abezindaba ukuthi kakumele abantu bathuke ngezinguquko abazozibona kule kilabhu ngesizini ezayo njengoba isezinhlelweni zokuqinisa isikwati sayo ngabadlali abalikhulumi-sayo ibhola.
Ebuzwa ngokuvikeleka ko-mqeqeshi wezakhe, uMandla “Mhloli” Ncikazi emakilabhini angase amnunusele ngomsebenzi ngemuva kokushaya into ecokeme kuBafana Bes’thende abahole baqeda endaweni enhle okokuqala ngqa esigabeni esikhulu, uthe emhlabeni akekho umuntu okumele umvimbe.
“Kangikholelwa ekuvimbeni umuntu uma ethola amadlelo aluhlaza. U-DJ Tira ongumculi weGqom Music uyaye athi, ‘hamba uyongikhumbula’. Kumqoka ukuba umyekele umuntu uma efuna amadlelo aluhlaza, umdedele andize. Bakhona abanye esi-ngabathola baqhubeke nomsebe-nzi,” kusho lesi sikhulu.
Sizeseka lesi sikhulu enkulumweni yaso, sithe ngisho kwazona izintatheli ezisekulo mkhakha njengamanje, zangena ezicathulweni zezinye ezazenza umsebe-nzi omuhle phambilini, esezashiya.
Sithe kumqoka kakhulu ukuqi-nisa izinhlaka zenkulisa yale kila-bhu kwazise yizona eziyinhliziyo yamakilabhu ebhola elikhokhelayo.
Lesi sikhulu sithi kuyinto enhle kakhulu ukuthi ibhola laKwaZulu-Natal liyakhula. Uthi no-Irvin Khoza onguSihlalo wePremier Soccer League (PSL) uhlale eku-khuthaza ukubekwa kwalesi sifu-ndazwe ebalazweni kunobhutshuzwayo wakuleli.
Ubekhuluma nabezindaba emcimbini obuhlelwe wumasipala weTheku wokubungaza ukwenza kahle kwamakilabhu akuleli dolobha adlala kwiPSL okuwuSuthu ne-Arrows kwiDStv Prem-iership neRoyal AM esembangwe-ni wokunyukela esigabeni esikhulu. Lo mcimbi ubungoLwesihlanu ebusuku e-ICC, eThekwini.
Previous articleKuhlukene imibono “ngamawele awu-10”
Next articleUyabalisa owesilisa odunwe imoto ‘ngamaphoyisa’